व्युटिसियन पेसामा लगनशिल भएर काम गर्नुपर्छ - Navanari
Home cover image व्युटिसियन पेसामा लगनशिल भएर काम गर्नुपर्छ
व्युटिसियन पेसामा लगनशिल भएर काम गर्नुपर्छ
६ चैत्र २०७८, आईतवार ०८:५७
करिब २० वर्षदेखि सौन्दर्य क्षेत्रमा लागेकी एक सफल महिला हुन् सुस्मा रावल । उनले अहिले ‘सृङगार घर’ व्युटि पार्लर सञ्चालन गरेकी छिन् । उनले आफ्नो पार्लरमा व्युटिसियन सम्बन्धी सेवा मात्र हैन ट्रेनिङ पनि दिने गरेकी छिन् । जहाँबाट हजारौँ महिलाले सिप सिकेर रोजगारी हासिल गरेका छन् ।
व्युटिसियन पेसामा आवद्ध भएको कति वर्ष भयो ?
व्युटिसियन पेसामा आवद्ध भएको २० वर्ष भयो । सुरु सुरुमा यो पेसाबाट अगाडी बढ्छु भन्ने सोच थिएन तर । बिस्तारै जान्दै बुझ्दै गए । यो पेसाको आवश्यकता र महत्व व्युटिसियन भन्दा पनि मलाई ट्रेनर बन्ने रहर थियो । यसै इच्छाले आज यहाँसम्म आइपुगेको छु ।
तपाईंले ट्रेनिङ सेन्टर खोल्दा कति जना थिए ?
मैले ट्रेनिङ सेन्टर खोल्दा सुरुमा ६ जना थिए । तर अहिलेसम्म हजारौँलाई सिप सिकाएर रोजगारी दिन पाउँदा निकै खुसी लाग्छ ।
तपाईं यो पेसामा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म यो पेसामा सन्तुष्ट छु । मैले काम गर्दै गएपछि ग्राहकको मुहारमा जुन प्रकारको खुसी देख्छु त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिन्छ ।
तपाईंको पार्लरमा केके सेवाहरु छन् ?
मेरो पार्लरमा व्युटि सम्बन्धी सबै प्रकारका सेवाहरु उपलब्ध छन् । जस्तै–ट्रेनिङ सेन्टरमा असिसटेन्ट व्युटिसियन,एडभान्स व्युटिसियन, विशेषगरी हेयर केमिकल, स्किन ट्रिटमेन्टदेखि लिएर अहिलेका सम्पूण नयाँ कोर्सहरु जसमा, माइक्रोबिल्डिङ,आइलेस एक्सट्रेन्सन, आइलेस लिफटिङ र प्रोफेशनल मेकअप पनि सिकाइन्छ ।
तपाईं आफ्नो पार्लरमा विशेष गरी कुन सेवालाई जोड दिनुहुन्छ ?
म मेरो पार्लरमा विशेष गरी हेयर केमिकल र हेयर कटिङलाई जोड दिन्छु । यसका साथै मेकअपलाई पनि बढी जोड दिन्छु । पछिल्लो समय भने ट्रेनिङलाई ध्यान दिइरहेको छु ।
व्युटिसियन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न कतिको गाह्रो छ ?
व्युटिसियन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्भा गर्न निकै गाह्रो छ । अहिले त यो पेसाले राम्रो मार्केट पनि लिएको छ । त्यसैले आफ्नो काम हेरेर मूल्य तोक्नुपर्छ ।
यो क्षेत्रको भविष्य निकै राम्रो छ । सिप सिकेर कहिले पनि खेर जादैन । आजभोली झन क्लाइनटहरु पनि एडभान्स हुँदै गइहरेका छन् । साथै हाम्रो पेसाको महत्व पनि निकै बढिरहेको अवस्था छ ।
यो क्षेत्रमा लाग्ने महिलाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
म यस क्षेत्रमा लागने महिलाहरुलाई सबै भन्दा अगाडी धर्य भएर काम गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । किन भने यो पेसा सेवासँगै व्यपार पनि हो । काम गर्दै जाँदा कहिले काहीँ निरास हुने समय पनि आउँछ तर हिम्मत हार्न हुँदैन । लगनशिल भएर काम गर्न र क्लाइनटहरुसँग सुमधुर भएर व्यवहार गर्न आग्रह गर्दछु ।
व्युटिसियन न भएको भए के बन्नु हुन्थ्यो ?
म व्युटिसियन न भएको भए स्कूलको सञ्चालन गरेर बस्थे ।
अघिल्लो पोष्टबेँसीसहर–चामे सडक खण्ड थप १० दिन बन्द
अर्को पोस्टसरकारी जागिर छोडेर गायन क्षेत्रमा सक्रिय गायिका कला लम्साल